Dubbachuun daandii jaalala inni tokko isa biraaf qabu ittiin ibsatuudha. Wonti gaariin garuu, ergaa jaalalaa dabarfachuuf jecha si jaaladhaa, namoota tokko tokkotti akka dhagaa ulfaata, arrabni qabachuuf sodaata, jedhutti dhimma bahuun dirqamaa miti. Ergaa kana mallattoolee addaddaatti dhimma bahuun jaalala namaaf qabnu ibsuun nidanda'ama.
<>Kutaa kana irra dhaabadhuutii Waaqayyo jaalala Inni siif qabuuf Isa galteeffadhu! Utuu Inni siin hin jaalatu ta’ee, yeroo ati cubbuu hojjette, yeroo diinonnii kee si irratti ka’an, yeroo namoonni hamaa si irratti yaadan, Yeroo atumti immoo of irrattti hamaa yaadde, badiisa guddaa badda turte. Jireenyaafi jaalala fooyyessuuf muranne taanaan, jecha murannoo jedhu jala naaf sararaa, torbaan tokko kana, isa dhufu kan biraa fudhannee irratti yoo hojjanne jaalala keenna nigabbisna, sukkaaraafi damma itti goona. ... Jecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda'ama. Jan 12, 2015. Qabxiilee 12 jaalala ...Aug 13, 2019 · Ergaa Islaama baadhachuun gootumma fi dhiirummaa cimaa barbaachisa. kanaafu, bakka gootummaan, dhiirummaan, qalbiin qulqulluu taatee fi sammuu hatamtamaan waa qabattu jiran ergaa Islaamaa guddaa kana kaa’un, bakka sirrii kaa’udha. Dhugumatti, Rabbiin Beekaa, Ogeessa ta’eera. Ogeessa jechuun wanta hundaa bakka isaaf malu kan kaa’udha.)
87 - Nabi muusaaaf kitaaba towraat jeamu dhugumaan kenninee jirra Eega isaatii anb- iyoota hedduu ergine ergaa isa faana dee- msifne jechu Nabi iisaa ilma maryamiif wa- an ergamaa Rabbii tayuu isaa baysisu ken- ninee jirra Jibriilin isa jabeessinee jirra kan bakka nabi iisan deemu hunda wajji deemu Si isin hogguma ergaan keenya isinitti dhu ...
~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:10 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa.pdfItti gaafatamaan amantii Kaatolikii Roomaa Pope Firaansisi ammoo kiristaana Vaatikaan naannoo St.Piiter duratti walti dhufee ergaa gammachuu dabarse "Hardha hariyummaa kiristaan gama Bahaa waliin dhaloota goofataa ulfeeffanna nagaa fi jaalala isanii hawwa.” Kiristaanii akkuma aadaa isaatti dhaloota Yessoo Kiristoo ulfeeffata. "Nutti ergaa nuti ni kunuunsina," jechaa jiru. ... Somaaloonni ammoo gaalaaf jaalala olaanaa qabu. Qabeenyaa isaanii kan madaalanis maallaqa callaa harkaa qabaniin osoo hin taane, baayyina gaalaa ...“Jaalala fagoo hin amanin, ‘the nearest is the dearest”, amma wayita kanatti maal akka hojjachaa jirtu beektaa fayyaalessa koo?” “Isheen waan feete hojjachuu dandeessi; sun mirga ishiiti. Ofi jette naaf yaa amanamtu, ofii jedheen ishiidha amanamaafi.
wal-gorsuu, jaalala isaatiinis wal-jajjabeessuu, hafuura wali-inis tokkummaa qabaachuu, walii nawuu fi garaa walii laafuu kamiyyuu yoo qabaattan, 2Yoos yaadaan tokko ta'uun, jaalala tokko qabaachuun hafuuraa fi akeekaan tokko ta'uun gamma-chuu kiyya fiixaan naa baasaal. 3Isin gadi uf qabuun akka waan warri kaan isin caalaniitti lak-
Waaqeffannaan of keessatti, gammachuu, jaalala, sagada, oofuu, kadhannaa, of kennuu, abboomamuu, walii ofii mararsiifachuu, waliif jiraachuu fi k.k. f of keessatti ni hammata. Gochaan Waaqeffannaa kaayyoo ol aanaa tokko qabaata jireenya amantii kiristaana keessatti Waaqayyof safuu buufachuu. Gara EveryBarataa.com baga nagaan dhuftan. Kun bakkatti waa'ee Kolleejii, waa'ee jireenyaa fi waa'ee Waaqayyoo caalmaaatti bartani dha. JAALALA BILISUMMAA. Aside Posted on September 15, 2013 Updated on October 3, 2013. ba’aa gabrummaadhaan ... Ergaa biraas qaba dargaggootaafillee Kan ofii gatanii laga Dec 22, 2014 · Kanaaf, jaalala alagaa kan gaafa rakkoo argee waan hinbeekneef, qormaata godhee yaada sirbicharraa dhagahe addaan baafachuu fedhe. Gaaftokko ganama qormaata geggeessuu barbaadu haadha warraa isaatti himee mari’ate. Paatriyaarkiin Ortodooksii Ityoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas, ergaa ayyaanaa isaanitiin ayyaanni dhalootaa Kiristoos dhiifamaa fi jaalala nu barsiisa jedhaniiru. Nageenyi yoo hin jiraanne sochii kamiyyuu taasisuun hindanda’amu waan ta’eef waa hunda dura nageenyaaf dursa kennuun barbaachisaadha jedhaniiru. Adeemsi tokkummaaf jaalala orumummaa afrikaa kibbaatti eegale; gootota sabboontota fii hawaasa oromoo afrikaa kibbatti argamaniin galma gahee fakkeenya adunyaa ta’uuf marxifannee kaaneera . Mee drama ergaa guddoo qabdu mata dureen isii ABBAA ABDII jetuu kan guyyaa kaleeysaa guyyaa OYASAN dhihaatte dramaa gabaabduu artisti fii walaleeysa ... Jibbis jibba hin balleessu, jaalala qofaatu jibba balleessuu danda’a. #Humni guddaan diina ofii ofitti firoomfachuu nama dandeessisu jaalala qofaadha. Jaalalli meeshaa ati yoo of harkaa qabaatte yeroo hundumaa ittiin mootuu dha! #Jaalalatti qabamee jiraachuuf murteesseen jira. Jibbi ba’aa ulfaataadha waan ta'eef hin baadhu!
“Jaalala fagoo hin amanin, ‘the nearest is the dearest”, amma wayita kanatti maal akka hojjachaa jirtu beektaa fayyaalessa koo?” “Isheen waan feete hojjachuu dandeessi; sun mirga ishiiti. Ofi jette naaf yaa amanamtu, ofii jedheen ishiidha amanamaafi.
Abdissa Indalew is on Facebook. Join Facebook to connect with Abdissa Indalew and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa’ee nagaa ana dhoowwata. Agariin ummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan garboofta abbaa irree sanaaf Agarii argachuun lilmoo takkittii tuulaa cidii guddaa keessa barbaaduu itti ta’e. kana irraa ka’uudhan nama Agarii qabes ta’ee nama Agarii bakka jiru argee mootummatti himeef badhaasni guddaan akka kennamu labsame. Furtuun isaa jaalala Waaqayyo barbaaduudha, kan kee miti. “Waaqayyotti gammachuu qabaadhu, inni immoo kadhata garaa kee siif ni kenna”(Psalm 37:4). Yoo Macaafni Qulqulluun isa mormuudhaaf hin dubbanne ta’e inni hafuuratti siif kan bu’aa qabuudha, egaa Macaafni Qulqulluun akka murteessituu fi akka garaa kee akka hordoftu “hayyama ... Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMSAfaan Oromoo Application - Ergaa Jaalala for all Oromo people. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopianjibbuun mulatu mit. (1 Ergaa Yohannis 4:16) Ani abba kee atis ilma koo waan taateef jaalala koo hundumaarra caala siif baayise. (1 Ergaa Yohannis 3:1) Maatiin ke ati foonitti irraa dhalate kennaa siif kennuu hin dandeenye caala kennaa guddaa siif kenne. (Wangeela Maatewoos 7:11) Abbaa kee isa sirrii waanan ta‘eef. (Wangeela Maatewoos 5:48) Dec 27, 2020 · Aplicación kana irratti Ergaa Jaalalaa miidhagoo fi nama hawatan Afaan Oromootiin argachuu ni dandeessu. waliigalatti App'n kun Ergaa Jaalalaa 200 olii kan de keessatti hammateedha. yeroo yerotti kan isiniif daballu ta'a. Nama jaalattaniif Ergaa Jaalaalaa Erguudhaan jaalala keessan ibsadhaa. Gara EveryBarataa.com baga nagaan dhuftan. Kun bakkatti waa'ee Kolleejii, waa'ee jireenyaa fi waa'ee Waaqayyoo caalmaaatti bartani dha.
Ergaa Jaalala Love txt message. 1,970 likes · 5 talking about this. Ergaa eenyuf dabarsuu feeta ? Hin dhiphatin ! Pejii kana " like " eega goote nama erguufi barbaaddu aferi. Eegasi...
Feb 28, 2013 · Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmaa Oromoo biraa jaalala fi kabaja guddaa qabu ta’uun beekkamaa dha. Kabaja fi jaalala kan horate hojii saba Oromoo boonsu hedduu waan hojjeteef; injifannoo hedduu waan galmeesseef. Qubeen afaan Oromoo amma biyya keessaa ittiin hojjetamaa jiru injifannoolee gurguddoo kana keessaa isa tokko. 2.Jaalala abbaa fi haadhaa-Jaalalli abbaa fi haadha iddo guddaa qaba. Jaalalli bu’uura maatii tokkooti. Bakka jaallalli hin jiretti maatiin ijaarramu hin danda’u. Abbaa fi haadha jaallachuu jechuun afaanin isin jaalladha jedhanii ergaa isaanii fudhachu didu osoo hin ta’in isaanii ajajamuu fi tola itti ooludha. Rabbiin 87 - Nabi muusaaaf kitaaba towraat jeamu dhugumaan kenninee jirra Eega isaatii anb- iyoota hedduu ergine ergaa isa faana dee- msifne jechu Nabi iisaa ilma maryamiif wa- an ergamaa Rabbii tayuu isaa baysisu ken- ninee jirra Jibriilin isa jabeessinee jirra kan bakka nabi iisan deemu hunda wajji deemu Si isin hogguma ergaan keenya isinitti dhu ... Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God . Seensa. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana.
Ergaa Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Banamuu Manneen Barnootaa Sabbeeffachuudhaan dabarsan ===== Weerarri idil-addunyaawwaan Dhiibee COVID-19 guyyaa mul’aterraa eegalee addunyaan gaaga’ama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa salpahaa hin jedhamne keessumeesaa akka jirtu ni beekama.
Jireenyaafi jaalala fooyyessuuf muranne taanaan, jecha murannoo jedhu jala naaf sararaa, torbaan tokko kana, isa dhufu kan biraa fudhannee irratti yoo hojjanne jaalala keenna nigabbisna, sukkaaraafi damma itti goona. ... Jecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda'ama. Jan 12, 2015. Qabxiilee 12 jaalala ...Ergaa Mootummichaa labsuurratti hirmaachuun mirga guddaa akka taʼetti ilaalaniiru. Masaraan Eegumsaa Bitootessa 15, 1926, 'Obboloonni amanamoo taʼan ergaa kana namoota kaanitti himuuf fedhiidhaan of dhiheessu' jedheera. Obboloonni amanamoon kun yaada raajiidhaan dubbatameefi Faarfannaa 110:3⁠rratti argamuu wajjin haala walsimuun ...Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas ... Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas ... Ergaa Jaalala Love txt message. 1,970 likes · 5 talking about this. Ergaa eenyuf dabarsuu feeta ? Hin dhiphatin ! Pejii kana " like " eega goote nama erguufi barbaaddu aferi. Eegasi...barreessichaati. Barreessaan ka’umsaa kaayyoofi ergaa dabarfatu ni qaba. Qabiyyeen barreeffamichaa nuyiifi homaa jechuu miti akkuma barreessicha kaka’umsa argatee isa durii, duraa sani. Fedhiin isaa seenaa, miirama, aadaa ufiifi bu’uura keenya miti furtuudha. Hojmaanni cinaacha hiikkaa adda itti hin baanedha, garuuu hiikkaan
Namoota bayy’ee xiqqaa ta’aniidha, yoo kan jiran ta’e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Ammas hedduun namootaa waan jaalala isaanii gidaara manaan wolitti buusu, galaana dhufaa jiru fudhachiisu irraa fagotti uftiksu.
Haala isaa irratti hundaaʼuudhaan ergaa barreeffamaa ilaalchisee seera mataa kee baafachuu dandeessa. Wanta beekuu qabdu: Ergaa barreefamaa ilaalchisee of eeggannoo hin gootu taanan, michoota kee biratti fudhatama argachuu mannaa akka waan addaggee taatetti kan ilaalamtu taʼuu isaa irra iyyuu si irraa fagaachuu dandaʼu. "Seera ergaa barreeffamaa ilaalchisee baaste dagachuun salphaa dha.Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Dec 22, 2014 · Kanaaf, jaalala alagaa kan gaafa rakkoo argee waan hinbeekneef, qormaata godhee yaada sirbicharraa dhagahe addaan baafachuu fedhe. Gaaftokko ganama qormaata geggeessuu barbaadu haadha warraa isaatti himee mari’ate. Dhaloonni ergaa isaani sirriitti dhaamuu qaba.” Aartiin maal jetta jennaan: “Anaaf aartiin jaalala,anaaf aartiin dinagdee,aartiin anaaf siyaasa,aartiin anaaf waan hunda.Haala kami keessaatuu yoo ilaaltu misaayila jabaa caala,aartiin baayyee humna qaba,sabnii aartii hin qamne sabaa hin tahuu,” jedha.
Dec 19, 2006 · fedhii jaalala muuziqaa tan isa keysa jirtu ifatti baasuuf Abdii Mahammed wajjiin hujii muuziqaa qindeyfate shakala xumuree albama tokkofaa isaa gitaara Ahis habbootan dabaalee mana muuziqaa JOLIY kan je’amutti gurgure. garuu kaasettiin isaa osoo magaalaarra hin ooliniif, sirni gitabittaa isappaa dargii qabsoo cunqurfamootaatiin bar bodaawe kufe. Ergaa Jaalala Love txt message. 1,970 likes · 5 talking about this. Ergaa eenyuf dabarsuu feeta ? Hin dhiphatin ! Pejii kana " like " eega goote nama erguufi barbaaddu aferi. Eegasi...
Feb 22, 2018 · namni hunduu dirqamaa jaalala fi nagenyaa umataa isaa eeguu qaba, dhaalotta dhufuu waan akka dhakka bu,uraa lafaa kayyuuf qabna,kunis dirqamaa hundaa keenati.waani namni tokko hojjatte manati nuuti fiduu mitti.haawasichii damaqinaani irrati hirmachuu qaba.hawasaa kamiyyuu keessati tokko yerroo ijjaru tokko diguun jiraa ,osso kuni jirree ta.ee mootumman woyanne woggaa 25 nuu bulchittuu turree ...
Ergaa annaf jechaa offi off kennitee. Fayyinnakoof jechaa atti dararamtee. Maddakoo madaftee annaf dhidhitametee. Bakkakoo cinninsuu iyyan cinninfatee. Boqqun gaddi siccabee annaf lafaa ilaltee. Bellaf dhebuu argitee ergaa dallachoftee. Malliree …manni! bo'uufi gaddodinkoo. Mallifaan nagadda nabohaa kessikooJan 30, 2015 · Kanaafuu sabni bal’aan kun ergaa guutummaa kitaabicha keessatti argamuu dubbisee xiinxaluun yaada ijaarsaa, qeeqaafi kallattii qorannoo birootiif ka’umsa akka ta’uuf kan itti yaadamedha. Ani akka barreessaa kitaaba kanaatti nama dhuunfaa yookaan dhaaba kamuu jeequuf yookaan balleessuuf utuu hintaane, qaamni kamuu dogoggora jiru mara ...
Feb 15, 2012 · Aman Bakka jiruu irraa xalay kana lammii isaaf ergee dha ega waan dandeenyuun akka bira dhaabbanuu jechaa ergaa isaa kana ilmaan Oromoo hundaaf dhaamnee jira. Seenaa gabaabaa weellisaa Amaan /A.G./ Goobanaa Oromiyaa godina Arsii Aanaa kafalee ganda qonnaan bulaa waam ‘anyee Abboosaatti Fulbaana 11-1985 dhaladhe. morki maatiin Eenyummaa ufiitiif qaban gara kiyya darbee sammu kootti…
Jaalala hiriyyummaa keessatti jaalala akkasii shaakaluuf duraan dursinee jaalala Waaqayyoo shaakaluu qabna. Namni kamiyyuu jaalala Waaqayyo isaaf qabu otuu hin shaakaliin dura, jaalala akkasii kana nama biraaf otuu gar-gar hin kutiin mul’isuu fi shaakaluuf hin danda’u.
8 Saboota biroof kabajaa fi jaalala Oromoon qabu daran jabeessaa 9 Diddaa fi mormii naannoo keessanitti ta’an otuu hin tufaftiin miidiyaa akka OMN,OVR, VOA, SBO, fi Facebook addaddaa irratti gabaasuu hin dagatiinaa! Kana keessattii kitaabinni ykn filmii tokko yoo bahuu ergaa tokko qabatee hawwasaa bira gaha. Abbaan kitaabichaa yookin fiilmichaa ergaa isaa san ummatatti barrefate yookin amansiisuu yalee. Ummanni sirridha jedhee wanta san fudhata, darbees wanta jedhame san rawwachuuf socho’a. yookin immo wanticha mormuun wantichi akka sirrii hin taane ibsata.
Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMSAfaan Oromoo Application - Ergaa Jaalala for all Oromo people. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian May 26, 2020 · Namoota addunyaa kanarra jiraatan hundumaaf kan ibsitu ibsaan dhugaa, jaalala namaaf jettee gara addunyaa kanaatti kan dhufte. Uumamni hundumtuu dhufaatii keeti ni gammadu. Addaamiin dogogorarraa deebisteenii, Hewaaniinis hidhaa du’aa jalaa baasteenii, Afuura ittiin dhalannu nuuf kennite, Ergamoota wajjin si galateeffanna.
Jaalala naaf qabdu irraa kan ka'e ergaa naaf ergiteef, dhaamsa na bira ga'e kanaafis sin galateeffadha. Anis egaa gara Si'ol dhaquu fi bara baraanis dhiphachuu hin fedhu. CUbbuu koo isa darbe hundumaa anaaf dhiisi. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God . Seensa. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana.
Hawaasni Oromoo dubbii ergaa guddoo qabdu dabarfachuufi gabaabsee fixuuf mammaaksatti dhimma baha. Dubbiidhuma kanaafillee mammaaksa qaba - Mammaaksi dubbii fida, ni fixas. Afoola Oromoo: Mammaaksa Oromoo guyya guyyaan